Ungaitei Kana Uchiramba Uchizvidya Mwoyo?
SARUDZA MUTAURO Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bengali Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiKaren (S'gaw) ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Lamba Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mizo Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Vietnamese Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
“Ndaida kutenga zvokudya zvinogutsa asi ndakangowana kuine mabhisikiti chete, achitengeswa nemari yakapetwa ka10 000 kupfuura mutengo waaifanira kutengeswa nawo! Mangwana acho, zvitoro zvakanga zvisisina kana zvekudya.”—Paul, Zimbabwe.
“Murume wangu akandishevedza tikagara pasi, ndokundiudza kuti akanga ava kusiya mhuri. Ndaizoita sei ndarambwa seizvi? Ko vana vangu ndaizovarera sei?”—Janet, United States.
“Masairini paanotanga kurira, ndinomhanya ndichitsvaga pekuhwanda, uye ndinorara pasi uku mabhomba achiputika mudenga. Pashure pemaawa akati kuti, maoko angu anenge achiri kudedera.”—Alona, Israel.
Tiri kurarama mumazuva ane zvinhu zvinoita kuti tizvidye mwoyo, “nguva dzinonetsa dzakaoma kubata nadzo.” (2 Timoti 3:1) Vakawanda vari kuoneswa chitsvuku nematambudziko ekushaya mari, kuparara kwemhuri, hondo, zvirwere zvinouraya, uye njodzi dzinongoitika dzoga kana kuti dzinokonzerwa nevanhu. Chimwewo ndechekuti vanhu vanonetseka pavanofunga zvinhu zvakaita seizvi: ‘Ko bundu randiinaro ikenza here?’ ‘Ko zvinhu zvichange zvamira sei munyika pachakura vazukuru vangu?’
Hakusi kuzvidya mwoyo kwose kwakaipa. Tinowanzozvidya mwoyo patinenge tichida kunyora bvunzo, kumira pamberi peruzhinji kana kuti patinobvunzwa neari kuda kutipa basa. Uye kutya zvinhu zvakaipa kunoita kuti tisapinda munjodzi. Asi kugara tichizvidya mwoyo kana kuti kunyanya kuzvidya mwoyo kunokuvadza. Tsvakurudzo dzichangobva kuitwa pavanhu vakuru vanopfuura 68 000 dzakaratidza kuti kunyange kuzvidya mwoyo kuri pakati nepakati, kunogona kuita kuti munhu akurumidze kufa. Ndosaka Jesu akabvunza kuti: “Ndiani wenyu anogona kuwedzera kubhiti rimwe chete paurefu hwoupenyu hwake nokuzvidya mwoyo?” Chokwadi kuzvidya mwoyo kunoita kuti munhu asararame kwenguva refu. Ndosaka Jesu akati: “Regai kuzvidya mwoyo.” (Mateu 6:25, 27) Asi izvi zvinokwanisika sei?
Zvinokwanisika kana tikashandisa uchenjeri hunobatsira, tikava nekutenda kwechokwadi muna Mwari, uye kana tikasimbisa tariro yechokwadi yeramangwana. Regai tione kuti izvi zvakabatsira sei Paul, Janet, naAlona kuti vakunde kuzvidya mwoyo. Kunyange kana zvinhu zvisina kutiomera iye zvino, zvinogona kuzotiomera mune ramangwana.
Text Nzira dzokudhaunirodha nadzo mabhuku NHARIREYOMURINDI July 2015 | Ungaitei Kana Uchizvidya Mwoyo?